Amathiphu Wokuphepha Kwikhompyutha Wawo Wonke Umuntu Noma Kunini | Kusuka kuLinux
Kulokhu okuthunyelwe sizokhuluma ngokusebenza okuthile «Consejos de Seguridad Informática» kwabo bonke, okufanele sisetshenziswe nganoma isiphi isikhathi noma indawo empilweni yethu, kungaba yomuntu siqu noma emsebenzini.
Masikhumbule ukuthi izikhathi eziningi, kungaba sekhaya, emgwaqweni noma emsebenzini, Imvamisa egameni lokukhiqiza noma lokunethezeka, senza imisebenzi noma senze izinto ezivame ukungqubuzana nemikhuba emihle ngokuya «Seguridad Informática», okuthi ngokuhamba kwesikhathi, kungadala izinkinga ezinkulu noma izindleko kubo noma kwabanye.
Noma kunjalo, kungukuhlanganiswa kwe- izinyathelo ezidingekayo nezibalulekile ze «Seguridad Informática» emisebenzini yethu, yomuntu siqu nomsebenzi, enye yezindlela ezingcono kakhulu zokwenza sithuthukise «productividad» uqobo noma njengabasebenzi, noma ezinkampanini zethu noma ezinhlanganweni lapho sisebenza khona.
Amathiphu, izincomo, izinyathelo noma izindlela, ezingasukela ekusebenziseni noma ukulahla izinhlelo ezithile zokusebenza ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi baphephile ngokusebenzisa «Seguridad Informática» kufakwe ekusebenzeni kwemisebenzi yabo.
1 Amathiphu Wokuphepha Kwekhompyutha
1.1.1 Nciphisa inani lokwephulwa kwezokuphepha
1.1.2 Shintsha zonke izinqubo zokuphepha
1.1.3 Sebenzisa kahle ukuxhumana kwe-inthanethi
1.1.4 Thanda ukusetshenziswa kwama-VPNs
1.1.5 Yiba nesipele noma uhlelo lwezimo eziphuthumayo
1.1.6 Sebenzisa izindlela ezimbili zokuqinisekisa
1.1.7 Gcina ipulatifomu yesoftware ivuselelwe
Amathiphu Wokuphepha Kwekhompyutha
Nciphisa inani lokwephulwa kwezokuphepha
Thola kusenesikhathi bese wehlisa inani lokwephula umthetho «Seguridad Informática» senzaniKungasidla isikhathi esiningi, kuya ngezinsizakusebenza esidinga ukuzisebenzisa, kepha zingasigcinela isikhathi esiningi esikhathini esizayo, ngoba esikhundleni sokuchitha isikhathi silungisa izinkinga ezilethwayo, sisisebenzisa ekuvimbeleni ukwenzeka kwazo.
Ngisho nokugwema imiphumela ehlobene ne- «incidentes informáticos», njengokwenza izaziso zangaphakathi nezomthetho, ukulahleka kwamakhasimende okungenzeka, kanye nokwehliswa kwesimo sokusebenza. Icebo elihle «Seguridad Cibernética» iqinisekisa ukuthi lokhu akwenzeki.
Shintsha zonke izinqubo zokuphepha
Ukuzenzakalelayo kuvame ukufana nokwenza lula. Futhi wenze lula izinqubo ezihlobene ne- «Seguridad Informática» ngaphakathi kwemisebenzi yethu yomuntu siqu noma yomsebenzi, gwema imisebenzi ephindaphindwayo etholakala ukwehluleka komuntu.
Isibonelo, ukusetshenziswa kwe- «tecnologías RFID» noma of «escáneres biológicos», njenge «lectores de huellas digitales», ingenza lula futhi ithuthukise ukufinyelela ezindaweni ezizwelayo ngaphakathi kwezikhungo ngendlela ephephile. Okugwema ukuchitha isikhathi futhi okuletha ukwanda komkhiqizo womuntu siqu nowejwayelekile. Noma ukwenza i- «acceso remoto» kwimishini ethile noma amarekhodi emininingwane ngaphakathi kwawo, kuzovimba umuntu ukuthi abe kuleyo ndawo noma ekunikezeni amaphasiwedi namakhodi okufinyelela okuyimfihlo kwabanye.
Sebenzisa kahle ukuxhumana kwe-inthanethi
Ekhaya noma ehhovisi, ukufinyelela kwamahhala nokugcwele ku- «Internet», inikeza ukufinyelela emithonjeni eminingi yewebhusayithi engakhiqizi noma engaphephile, ngesikhathi samahora okukhiqiza abo bonke labo abakwaziyo ukufinyelela kuwo, okusho izindlela noma izindlela zokuchitha amahora womkhiqizo.
Ngakho-ke ukukhawulela ukufinyelela kumasayithi athile athanda ukuphazamisa, njengamasayithi wemidiya, amanethiwekhi omphakathi, noma amakhasi wokuqukethwe kwe-multimedia (umculo, ama-movie, amavidiyo, phakathi kwabanye) kungasiza ukonga amanani amakhulu we «horas de tiempo productivas» wena noma isisebenzi, esizotshalwa nakanjani emahoreni okukhiqiza. Ngaphezu kokusetshenziswa okungcono kwe- «ancho de banda» etholakalayo.
Thanda ukusetshenziswa kwama-VPNs
Ukwehliswa kwamandla ezabasebenzi njengamanje sekuwumkhuba womhlaba wonke, i- «Teletrabajo» kuyimfashini echumayo. Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwephesenti elikhulayo labasebenzi bakwamanye amazwe abakhethekile ukwenza izinsizakalo ezikude ngabantu besithathu.
Kuphi, ukusetshenziswa kwe- «VPNs» ivumela abantu abaningi ukuthi basebenze kalula futhi ngokuphepha kusuka noma yikuphi yanoma yimuphi umuntu, inkampani noma inhlangano, yomphakathi noma yangasese. Ngaleyo ndlela, ukuthi a «VPN» inikeza ukufinyelela kuzinsiza ezivela eceleni ngendlela ebaluleke kakhulu.
Yiba nesipele noma uhlelo lwezimo eziphuthumayo
Wonke umuntu, inkampani noma inhlangano kufanele ibe nemininingwane ebalulekile yemisebenzi yabo evikelekile, okusobala ukuthi kufanele bayisebenzise «copias de seguridad» ukuthi ivikelwe. Futhi kubantu abakwazi ukuyifinyelela, indawo yokugcina kanye nokuhlanganiswa nefu, izinyathelo ezidingekayo kufanele zisetshenziswe ukuqinisekisa ukwabiwa okungcono kakhulu nencazelo yokufinyelela nezimvume kudatha ebalulekile eshiwo ukuze kungabikho ukufinyelela okungenzeki. wafuna.
Una «perdida de datos»Akusho kuphela isikhathi esengeziwe, kepha futhi kulahlekelwe yimali, idumela ngisho namakhasimende. Kungakho ama-backups asebenzayo nezinhlelo zokutakula izinhlekelele zisiza ekugcineni izindlela ze- «operatividad de las operaciones» futhi uvikele imiphumela emibi yokwehluleka okunjalo noma izinkinga.
Sebenzisa izindlela ezimbili zokuqinisekisa
Sebenzisa njengendlela ye- «Seguridad Informática» ubuchwepheshe be «Autenticación de dos factores (2FA)», emisebenzini yethu noma yabanye, yomuntu siqu, yobungcweti noma yomsebenzi iyindlela enhle kakhulu, ngoba ingeza esinye isendlalelo sokuqinisekisa, okungukuthi, kufaka iqiniso lokuthi abasebenzisi badinga ukuthatha isinyathelo esingeziwe sokuqinisekisa ubunikazi babo ngaphambi kokuba bakwazi ukufinyelela.
Ngokusetshenziswa okufanayo, umsebenzisi udinga ukuthola ifayela le- «token one0time» kufoni yakho yangasese noma yezinkampani, lapho-ke uzodinga ukuyifaka nge-app yokuqinisekisa noma i-interface ukuthola ukufinyelela okuqinisekisiwe. Lobu buchwepheshe ngakho-ke bengeza i «capa adicional de seguridad» iqinile impela maqondana nezinqubo zokungena kwabanye. Ukusebenza kahle kuvimbela ukufinyelela okungafanelekile kolwazi olubalulekile noluyimfihlo, kusindisa ikhanda emiphumeleni elandelayo ye- «violaciones de seguridad».
Gcina ipulatifomu yesoftware ivuselelwe
Ukuze umuntu wangaphandle noma umsebenzisi ongagunyaziwe athole ukufinyelela emininingwaneni ebalulekile noma eyimfihlo noma imininingwane, kufanele aqale athole «vulnerabilidad» engaqhuma ukwenza ukungena. Futhi ngqo lokhu kuba sengozini ngokuvamile kulula kakhulu ukuthola kuzinguqulo ezindala zemikhiqizo yesoftware esetshenzisiwe. Njengoba izinguqulo zakamuva kuphela ezinamaphutha atholakele alungisiwe.
Lokhu kusebenza ikakhulukazi ku- «Sistemas Operativos» nezinhlelo noma izingqalasizinda zokusetshenziswa okubucayi kwezinhlangano noma abasebenzisi. Isibonelo esihle yilezi «Servidores web» okufanele izame ukuthi kusetshenziswe izinguqulo zakamuva nezibuyekezo zesoftware, ngoba imvamisa zingenye yezinhloso zokuqala ukuhlaselwa yilabo abenza lezo zenzo. Ngenxa yalokho, akukho okungcono kunokuzethemba nokuqiniseka ukuthi zonke izimbobo zokuphepha ezingaba khona ziyancishiswa noma zisuswe ngaphakathi kwezinhlelo zethu.
Sebenzisa amaphasiwedi aqinile (aqinile) bese uwavuselela ngezikhathi ezithile ukuvimbela ukuthi angaphindaphindeki kalula. Gwema igama lomsebenzisi nephasiwedi eyodwa yezinsizakalo eziningi.
Sebenzisa i-antivirus engcono kakhulu ngezibuyekezo zayo zakamuva.
Sebenzisa i-firewall enhle ukuvikela ukufinyelela kwinethiwekhi yangasese bese ubhala ngemfihlo imininingwane ethunyelwe ngenethiwekhi.
Qinisa ukuxhumana kwe-WiFi ngamaphasiwedi aqinile, ama-SSID afihliwe, Ahlungwe ngama-MAC futhi asebenzise eyodwa ukusetshenziswa kwangasese nenye ukusetshenziswa komphakathi. Futhi uvuselele amaphasiwedi ngezikhathi ezithile ukuze uwavikele ekuphindaphindweni kalula.
Gwema ukuxhumanisa amadivayisi ethu noma omsebenzi ukuvula amanethiwekhi ukugwema ukutheleleka, futhi ngaphezu kwakho konke ukwenza imisebenzi ebucayi, njengokubhanga noma ukuthengisa, kuyo. Futhi yenza lolu hlobo lokusebenza kuphela ngezindawo ezivikelekile neziqinisekisiwe.
Gwema ngangokunokwenzeka ukuvakashela noma ukufaka izinhlelo ezivela emithonjeni engaziwa noma esolisayo.
Lungiselela ukuvimba okuzenzakalelayo nangokushesha ngangokunokwenzeka kwamadivayisi ethu.
Thumela imininingwane emincane ngangokunokwenzeka kumanethiwekhi omphakathi, ikakhulukazi emsebenzini.
Ungaxhumi amadivayisi wangaphandle kusuka kusitori esingaziwa kuya kumadivayisi ethu, ngaphandle kwezinyathelo zokuphepha ezidingekayo, njengokusebenzisa i-antivirus kuzo ngaphambi kokungena kuzo, nokukhubaza ukwenziwa okuzenzakalelayo (i-CD / DVD / USB).
Sebenzisa i-ISP eyodwa noma amaningi athenjiwe futhi avikelekile ukugcina yonke into iphephile futhi itholakala.
Gwema ukulahleka kwamadivayisi eselula noma ukungagcini kwawo isikhathi eside, ukugwema ukuvezwa kolwazi olubucayi.
Qaphela ukulanda kancane futhi usebenzise noma yikuphi okunamathiselwe kuma-imeyili ethu. Ikakhulukazi labo abanamagama agqamile noma asemfashinini.
Vala, ukhiye futhi ucishe okokusebenza okudingekayo ukugwema ukungena okungafuneki, noma ukonakala ngenxa yokwehluleka kukagesi noma okunye okungalindelekile. Noma zigcine zinqamukile kwi-Intanethi ngangokunokwenzeka.
Buyekeza ngezikhathi ezithile izinhlelo zokusebenza nezandiso ezifakwe kumadivayisi asetshenzisiwe.
Yenza ilungelo lokusebenzisa ama-Operating Systems noma ama-Software programme aMahhala naVulekile. Uma udinga ukusebenzisa ama-Operating Systems noma ama-software we-propriary noma avaliwe weSoftware, nika ilungelo lokusebenzisa okwangempela ngamalayisense abo akhokhelwayo. Gwema ukusebenzisa izinhlelo eziqhekekile noma izinhlelo ezingathembekile ezephula (ziqhekeze) amalayisense abo.
Kumele sikhumbule ukuthi isixhumanisi esibuthakathaka kakhulu ochungechungeni lwezokuphepha yiso uqobo, noma abasebenzisi beplatifomu noma okokusebenza. Uma singakukhohlwa, sizobe sesinengxenye yomsebenzi osuwenziwe. Kungakho kubalulekile ukuqwashisa ngakunye ngezinyathelo ezidingekayo ze «Seguridad Informática», okumele siyenze ngawodwana nangokubambisana, ukuze sizivikele thina nabanye, kulezi zinsuku zokungazethembi okungaka ku-inthanethi.
Masibe nelungelo lokuxwayisa nokungabaza ekuhambeni kwethu kwansuku zonke, ngoba ukusola okuhle ngesikhathi kungasisindisa ekucasukeni, futhi mhlawumbe, nesikhathi nemali. Futhi khumbulani, lokho kubalulekile ukwaziswa okusha ngokuvela kwamasu amasha futhi angcono asongela thina «Seguridad Informática», ukuzama ukuzigwema noma ukusebenzisa isixazululo esiphumelela kunazo zonke.
Ekugcineni, uma ufuna ukufunda ezinye izihloko ezihlobene «Seguridad de Información», «Seguridad Informática», «Ciberseguridad» y «Privacidad» y «Software Libre» kubhulogi yethu Sincoma okuthunyelwe kwangaphambilini okulandelayo: Isigaba 1, Isigaba 2, Isigaba 3, Isigaba 4 y Isigaba 5.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Amathiphu Wokuphepha Kwikhompyutha Wawo Wonke Umuntu Noma Kunini, Noma Kuphi
Ubuntu 18.04.3 LTS isibuyekezo sesithathu sikhishiwe
IHarmonyOS, ipulatifomu yomthombo ovulekile wedivayisi ngayinye